Apple waxay maamuus ku siineysaa Martin Luther King boggeeda rasmiga ah | Wararka IPhone
Maanta waa maalinta Martin Luther King oo joogay Mareykanka iyo Apple waxay doonayeen inay maamuusaan iyada oo loo marayo degelkeeda rasmiga ah. Marar dhif ah waxaan aragnay bogga shirkadda oo loo beddelay dhacdo gaar ah. Wax bilaabmay geeridii Steve Jobs kadib iyo in dhif ah in lagu celiyo. Laakiin maanta waa maalin muhiim u ah Mareykanka, sidii awalba ahaydna, Apple waxay dooneysaa inay muujiso taageeradeeda shacabka ee ku aaddan la dagaallanka xuquuqda loo siman yahay ayna muujiso sida ay uga go’an tahay kala-duwanaanta.
Bilihii la soo dhaafay, shirkadaha tikniyoolajiyadda waxay ku dhexjireen iskudhafyo ururo kaladuwan oo baaraya in runti ay jirto kala duwanaansho dhanka shaqaalaha ah. Tilmaamahan fudud, Apple wuxuu muujinayaa inuu sii wado inuu ka dagaallamo waaxdan. Isla marka aad hesho web Sarkaalka shirkadda ee Mareykanka, waxaan la kulannaa sawir ah Martin Luther King iyo xigasho caan ah:
Mid ka mid ah su'aalaha joogtada ah ee ugu muhiimsan nolosha waa: Maxaad samaynaysaa si aad dadka kale u caawiso? ».
El Maamulaha Apple Tim Cook, ayaa sidoo kale doonayay inuu maamuus gaar ah u sameeyo Martin Luther King iyada oo loo marayo shabakada bulshada ee Twitter, taas oo maareeyuhu had iyo jeer ku firfircoon yahay. In tweets taxane ah, waxaan arki karnaa sawir kale oo Luther King ah oo ay weheliso xigashada soo socota:
"Waa inaan baranno inaan u wada noolaano sidii walaalo aan ugu wada halligno doqonno."
Xusuusnow #MLK: Su'aasha ugu adag ee degdegga ah ee noloshu waa "maxaad dadka kale u qabanaysaa?"
- Tim Cook (@tim_cook) January 18, 2016
Xusuusnow #MLK iyo hadaladiisa aan waqtiga lahayn. Waa inaanan waligeen ilaawin. pic.twitter.com/b8kXa4ZFZ1
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Apple waxay maamuus u siisaa Martin Luther King boggeeda rasmiga ah